केकीले भनिन्- अब फिल्ममा अभिनय गरिरहन सकिन्न ! – Khabar Silo
दर्जनौँ फिल्ममा अभिनय गरेकी अभिनेत्री केकी अधिकारीद्वारा अभिनित ‘छ मायाँ छपक्कै’ फिल्म नेपालभरका विभिन्न हलहरुमा प्रदर्शन भइरहेका छन्।
आज प्रकाशित नागरिक दैनिकले ‘छ मायाँ छपक्कै’की नायिक केकीसँगको अन्तर्वार्ता छापेको छ। सोही अन्तर्वार्ताको सार संक्षेपः
तपाईं अभिनित अधिकांश फिल्महरुले सफलता नपाइरहेको अवस्थामा ‘छ मायाँ छपक्कै’ले तपाईको करियर उकास्ला?
मेरो करियरको महत्वपूर्ण फिल्मको सूचीमा यो फिल्म पर्नेछ। यसमा मैले अभिनयमात्र नभएर फिल्मका विभिन्न पक्षबारे बुझने अवसर पाएँ।
‘छ मायाँ छपक्कै’ फिल्मबाहेक पछिल्लो समय कुनै फिल्म गरिरहनु भएको छैन, अफर नआएर हो?
अहिले ‘कमेडी च्याम्पियन’ नामक स्ट्यान्डअप कमेडी सो निर्माण गरिरहेकी छु। त्यसबाहेक कम र राम्रो फिल्ममा काम गर्न जोड दिएको छु।
फिल्म र म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुको साटो मेकिङतिर आकर्षित भइरहनुभएको छ। फिल्म निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ?
फिल्ममा अभिनय गर्ने कलाकारको अवधि सिमित हुन्छ। मैले चाहे पनि धेरै समय अब फिल्ममा अभिनय गरिरहन सक्दिन। बरु फिल्म मेकिङतिर लागेर नयाँलाई अवसर दिन लागेको छु।
महिलालाई विभिन्न मुद्दामाथि बुलन्द रुपमा आवाज उठाइरहने तपाईंले अभिनय गरेको ‘बीच बीचमा’ बोलको गीतमा महिलालाई होच्याउने शब्द प्रयोग गर्दासमेत कुनै आपत्ति जनाउनु भएन नि?
‘छ मायाँ छपक्कै’ फिल्मको ‘बीच बीचमा’ बोलको गीत मैले सुटिङमा जानु दुई दिनअघि सुनेकी थिएँ। त्यतिखेर स्पट ‘बिहे हुने कुरा छ’ भनेर लेखिएको थियो।
गीत रेकर्ड भएपछि बिहे हुने शब्द ‘ब्याउने’ भनेर सुनियो। गीत सुनेर मलाई दुःख लाग्यो।
सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी आइरहेका छन्। गीतको अर्थमा स्रोताको दोहोरो बुझाई छ।
समान पारिश्रमिकलाई लिएर उठाइरहनु भएको तपाईंले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा महिला र पुरुष कलाकारबीचमा पारिश्रमिक विभेद कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ?
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा महिला र पुरुष कलाकारबीचमा पारिश्रमिक विभेद छ। डेब्यु हिरोले अनुभवी अभिनेत्रीभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।
समान पारिश्रमिकको विषयमा नेपाली फिल्म क्षेत्र धेरै पछाडी छ। नेपाली समाजमा महिलाको अवस्था उभो नलाग्नुको कारण एउटा यो पनि हो।
७० बर्षका कोपाको २१ बर्षे परि जस्ती राम्री युवतीसंग धुमधाम बिबाह,सबै चकित (भिडियो सहित)
नेपाली हास्य टेलीश्रीन्खला हास्नु हुन्न है आजको नयाँ भाग सम्पूर्ण दर्सकहरु माझ भर्खरै सुपर अनलाइन टिभीबाट आइसकेको छ । नेपाली हास्य सिरियलहरु निर्माण हुने क्रम बड्दो अबस्थामा रहेको अवस्थामा हास्नु हुन्न है ले छोटो समयमै राम्रो चर्चा परिचर्चा कमाउन सफल भइसकेको छ । पुर्बबाट दर्जनौं सिरियलहरु निर्माण हुदै आएका भएपनी हास्नु हुन्न है सबैभन्दा रुचाइएको […]
काठमाडौं/ रुपा र कृष्ण वलीको जोडी सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल जोडी हो । उनीहरुको जिवनको संघर्ष मानिसको जिवनका लागि प्रेरणा दिने खालको छ । रुपा र कृष्ण कलियुगका लागि राधा र कृष्णका जोडी हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । हाल यो जोडीको लागि निकै ठुलो खुशी प्राप्त भएको छ । यी २ को सन्तान प्राप्ति […]
मुम्बई बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र हलिउड अभिनेता निक जोनस लोकप्रिय जोडीमध्ये एक हुन् । यी दुई सामाजिक सञ्जालमा छाइरहन्छन् । निक जोनससँग बिहे गरेकी प्रियंकाको केही समयअघि डिभोर्स हुने हल्ला पनि चलेको थियो । हल्ला जे चले पनि यो जोडी खुशी छ ।प्रियंकाले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्नो फ्युचर प्लानबारे बताएकी छिन् । प्रियंकाको भविष्यको […]